LEGO Technic ကို သုံး၍ ကြီးမားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရွှေ့ရန်မြင်ကွင်းများ
26 / 09 / 2021 27 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 429 Views စာ0မှတ်ချက် 421146×6Volvo Artသိမ်းထားသော Hauler, 42114 Volvo Loader က, App ကိုထိန်းချုပ်ထားသော LEGO, App-based Technic, ဆောက်လုပ်ရေး, ထိန်းချုပ်မှု +, ပထမ ဦး ဆုံး Lego အဖွဲ့ချုပ်, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Technic, အဝေးမှထိန်းချုပ်သည့်နည်းပညာ, နည်းပညာ, ဗီဒီယို, Volvo, Volvo ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း, YouTube ကို
ကျောင်းသားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲပုံဇာတ်လမ်း Lego နည်းပညာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိသောမော်ဒယ်သည်ပြေလည်သွားသည်။
p အဖြစ်art နှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု Lego Group နှင့် Volvo ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ ကျောင်းသားတစ်စုသည်ကြီးမားသောအသက်အရွယ်သုံးဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်ကိုတင်ဆောင်နိုင်သည့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။art များအတွက်မြှင့်တင်ရေး၏ ၄၂၁၁၄ ၆ × ၆ Volvo Artသိမ်းထားသော Hauler.
ကျန်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာ၎င်းတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အရာရှိထံသို့တင်ထားသောမိနစ် ၂၀ နောက်ကွယ်မှဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတွင်ထိုအကြောင်းအရာကိုစူးစမ်းလေ့လာနေသည် Lego YouTube ချန်နယ် ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှု Lego လိဂ်အဖွဲ့ ၀ င်များသည်နိုင်ဂျီးရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှအစစအရာရာ Lego နည်းပညာ လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းများအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
“ သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာခရီးကိုအစောဆုံးရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဟာဒီလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းပြီးအောင်စီမံနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေပိုဖြစ်စေဖို့ငါတို့က ၄၅ တန်ကျောက်တုံးတွေကိုထပ်တိုးပြီးသွင်းခဲ့ရတယ်” ဟု Libor Udržal, Master Builder and Engineer ကမှတ်ချက်ပေးသည်။ Lego အုပ်စုလိုက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ် ကန ဦး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်.
“ မော်တာတွေမှာ Lego နည်းပညာ6×6Volvo Artသိမ်းထားသော Hauler အစအနကို ၃.၆ ကီလိုဂရမ်ခန့်အလေးချိန်ရှိစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း Volvo A3.6H သည်အလေးချိန်ထက် ၁၁၀၀၀ ကျော်ပိုကြီးသည်။ ငါ့ရဲ့အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံအရတောင်ငါကိုင်ထားတဲ့အလုပ်ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ ”
Lego နည်းပညာ 421146×6Volvo Artသိမ်းထားသော Hauler တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးကနေအခုရနိုင်ပါတယ်၊ မော်တာပုံစံကဗီဒီယိုထဲမှာအစစ်အမှန်အတိုင်းရွေ့ဖို့တော်တော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုငါတို့သံသယဖြစ်မိတယ်။ သို့သော်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများသည်၎င်းအား CONTROL+ အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုသည်။
← LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းသည် COVID-150 ကိုတုံ့ပြန်ရန်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ လှူဒါန်းသည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ပင်လယ်ဓားပြနေဝင်ချိန် →